Umdlali weqembu eligijima ku-PSL nomfowabo bakhiphe ingoma | isiZulu
Umdlali weqembu eligijima ku-PSL nomfowabo bakhiphe ingoma
UMampintsha ofuna ophrojusa bomculo abashaya igqomu
Kuthiwa ubelalele umculo ezindlebeni oshayiswe yisitimela
Kazi baphekani uDJ Balck Coffee noBeyonce?
Durban - Umdlali webhola likanobhutshuzwayo odlalela iqembu elikhulu laseThekwini, usengene emculweni.
U-Andile Fikizolo ogijima kwiLamontville Golden Arrows uthi inhloso yakhe ngokungena emculweni wukuthi uzama ukufukula umfowabo uKhangelani Fikizolo odume ngelikaStix Manyanyisa osenesikhathi ekule mboni yomculo.
U-Andile uthi umfowabo unesikhathi eside kakhulu ekule mboni kodwa izinto zakhe azihlangani kahle.
OLUNYE UDABA: Ungena emculweni umlingisi weSibaya
"Cishe sekuphele iminyaka engaphezu kuka-8 uStix esemculweni kodwa izinto zakhe azihambi kahle. Ngibone kungcono ukuba ngisebenzise abantu engibaziyo abafana noPrince onguphrojusa wase-Afrotainment nabanye," kusho yena.
Lo mdlali webhola uthe umfowabo uyawazi kakhulu umculo futhi unekhono eliyisimanga kanti sekushoda kancane ukuthi izinto zakhe zihlangane.
UCarrot kanye noStix Manyanyisa basanda kudedela ingoma ethi, Izinsimbi, kanti lo mdlali thi naye ukhona kule ngoma njengoba elekelela umfowabo.
Uphethe ngokuthi uyazi ukuthi abantu bazocabanga ukuthi ukucula kuzomphazamisa ebholeni kodwa uthi ufuna ukukubeka kucace ukuthi okwamanje usiza umfowabo, kubika iLANGA.